YAANYO "RASPBERRY KUBYSHKA": SHARAXAADDA KALA DUWAN, SIFOOYINKA IYO SAWIRADA MIDHAHA - BEER CAGAARAN
Waxaa ku haboon in lagu koriyo, koriyo, iyo dhulka u furan, "Raspberry Poppy" yaanyo kala duwan: sharaxaad iyo sawir
Haddii aad u baahan tahay noocyo kala duwan oo yaanyo ah oo si guul leh loogu kobcin karo gobollada qaboobaha, u fiirso Raspberry. Yaanyadaasi waxay u dulqaadanayaan xaaladaha cimilada xun. Oo iyana waxay ku kori karaan labada dhul oo furan iyo koriyo.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sifooyinka wanaagsan iyo kuwa xun ee kala duwan, sharaxaadda iyo astaamaha, gaar ahaan beerashada waxaad ka heli doontaa maqaalkeena.
Yaanyo "Raspberry Kubyshka": sharaxaadda noocyada kala duwan
Magaca dugsiga Wargeyska Raspberry
Sharaxaad guud Kala duwanaanshaha bartamaha xilliga bartamaha
Foomka Wareeg, waxoogaa yar
Cunto dhexdhexaad ah 80-100 garaam
Cadaadiska cudurada Is-beddelidda cudurada waaweyn
Waxyaabaha kala duwan ee yaanyo Raspberry Kubyshka waa noocyo badhtamaha bartamihii. Laga soo bilaabo laga bilaabo deyrka si aad u buuxsamid, 111-115 maalmood ka gudub. Marka loo eego xaaladaha cimilada iyo xaaladaha cimilada qaboobaha, muddada bislaadu waxay kordhin kartaa 10-15 maalmood.
Isbeddelka ayaa u dhigma qaboojinta. Ma aha mid madaxbannaan. Waxay awood u leedahay in ay ku koraan labada dhulka, iyo in lagu koriyo. 1 kiiloomitir. m. beeray wax ka badan 3 dhir. Xoortay geedo cayiman. Heerkuna wuxuu gaadhayaa 75 cm, afkuna waa mid aad u qoto dheer, caleemo culus. Caleemaha waa weyn, oo cagaarta madow. Noocyo farabadan oo xoog badan oo ku saabsan laanta. Inflorescence dhexe. Heerkuna wuxuu leeyahay wadaag.
Waxaa lagu qaybiyey dhammaan gobollada dalka.. Waxay si fiican u koraan Novosibirsk, Irkutsk, Arkhangelsk. Waxaa lagu beeran karaa degaanka Krasnodar, Moscow, Leningrad, Yaroslavl, Vladimir. Buundooyinka noocaan ah waxaa laga heli karaa Belarus, Kazakhstan, Estonia, Moldova, Ukraine.
Qeybaha hoose waxay ku jiraan diiwaanka gobolka ee Federaalka Ruushka. Noocyada asaliga ah waa mid aad u adag "Sedek".
tayada ganacsiga sare;
gaadiidka fogaanta fog;
adkaysi u tahay cayayaanka iyo cudurada;
waxay ku kori kartaa gobollada qaboobaha ee dalka.
Dhibaatooyinka: waxay ubaahantahay xoqan.
Kala duwanaan waa dhexjir. Naqshadeynta isticmaalka cusub iyo diyaarinta saladhka. Tamaandhadu waxay kuxiran yihiin muuqaal, wareegsan, cufan, fareem. Hayso dheelitir yar. Midabka ee yaanyada dillaacsan yahay waa mid cad. Miraha si buuxda u bislaaday waxay leeyihiin hoon madow. Tirada kamaradaha: 6 ama kabadan.
Celceliska miisaanka mid ka mid ah yaanyo waa 80-100 garaam. Saamaynta ugu weyn waxay gaareysaa 200 garaam.
Wargeyska Raspberry 80-100 garaam
Rio sharaf 100-115 garaam
Honey 350-500 garaam
Orange Ruush 117 280 garaam
Tamara 300-600 garaam
King Honey 300-450 garaam
Apple Spas 130-150 garaam
Drop Honey 10-30 garaam
Tastes aad u fiican. Dhadhanka Tamaandhada waa macaan. Wax soo saarka yaanyada ganacsiga waa mid aad u sarreeya. Laga bilaabo 1 jibbaaran. m. waxay ururiyaan ilaa 9 kg oo miro ah. Qaybaha hoose waxay leeyihiin tayada ilaalinta wanaagsan. Waxaa la geyn karaa masaafo dheer. Dukaamada khudradda leh waxay joogi karaan ilaa 90 maalmood.
Waxaad isbarbardhigi kartaa wax soo saarka noocyo kala duwan leh noocyada kale ee miiska hoos ku qoran:
Wargeyska Raspberry 9 kg mitir labajibbaaran
Sidoo kale akhri boggayaga internetka: yaanyo yididiilo leh, mid go'an oo go'aamiye ah oo dheerad ah.
Sidoo kale noocyada noocan oo kale ah waxay yihiin kuwo sarreeya oo adkaysi u ah cudurrada, taas oo gabi ahaanba aan ahayn mid macquul ah in gariir goor dambe.
Buundooyinka si dhakhso ah ayey u koraan. Ka hor bilowga xilli sii kordhaya waa lagama maarmaan in la xadido koritaankooda. Kaliya waa in la sameeyaa hal stem. Caleemaha dhinaca ah waxaa lagula talinayaa in lagaa saaro mindi fiiqan ama dillaac. Garter waxaa laga yaabaa in loo baahdo xilliga Biliinka dambe. Marka dhirta ay koraan in ka badan 75 cm oo ay yihiin tiro badan oo ah miraha. Xaaladdan, waxaad isticmaali kartaa ganaaxyo iyo taageerooyin gaar ah.
Kala duwan yaanyo Raspberry Kubyshka ayaa leh dhadhan fiican. Naqshadeynta isticmaalka cusub. Waxaa lagu qaybiyey Ruushka oo dhan. Lagu abuuray beerashada hore bilaha Febraayo iyo Maarso.
Waxaad ku baran kartaa noocyo kale oo tamaandhir ah adigoo isticmaalaya xiriirinta miiska: